Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe 6.1.13.0 - .::just for share::.
Home » DVD Slideshow » Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe 6.1.13.0
DVD Slideshow လုပ်ချင်သူများအတွက် အဆင်ပြေစေမှာပါဗျာ။ ဓါတ်ပုံတွေကို စုစည်း
ပြီး နောက်ခံသီချင်းနဲ့ ပုံတစ်ပုံချင်းစီမှာ Effect တွေထည့်ပြီး Movie Slide Show လုပ်လို့ရတဲ့ Editor လေးဖြစ်ပါတယ်။ အပျော်တမ်းပြုလုပ်ချင်သူများသာအဆင်ပြေစေမှာပါနော်။ တကယ့် Professional ပြုလုပ်လိုသူများကတော့ Cyberlink Power Director လိုမျိုး နဲ့မှအဆင်ပြေစေမှာပါ။ အပျော်တမ်းဆိုပေမယ့်လည်းအထင်မသေးလိုက်နဲ့နော်။ Slideshow တစ်ခုကို ကောင်းကောင်းကြီးပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Feature တွေပါဝင်ပါတယ်ဗျာ။
- Blackberry, Nokia, Windows Mobile, Game Hardware......
OS System Requirements: Windows 7, Vista and XP